Mpaghara SEO: Gini bu ihe ogugu? Owuwu Okwu? | Martech Zone
Nchọta ime obodo bụ ndụ nke ihe niile nzukọ na-enyere mpaghara mpaghara aka. O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ọ bụ mba ikike nwere ọnọdụ n’obodo niile dị iche iche, ụlọ ọrụ ụlọ, ma ọ bụ ebe ndị agbata obi gị… nyocha azụmahịa na-egosi ebumnuche dị egwu na ịzụta na-abịa.
Ruo oge ụfọdụ, isi ihe na-eme ka e depụta aha ha na mpaghara bụ inwe ezigbo peeji ndị mepere emepe nke na-agwa obodo ụfọdụ, koodu nzi ozi, mpaghara, ma ọ bụ akara mpaghara ndị ọzọ nwere ike ịmata azụmahịa gị dị ka mpaghara. Igodo nke ịkwado mpaghara bụ iji hụ na ndekọ aha azụmaahịa depụtara gị ka ndị Google crawlers nwee ike nyochaa mpaghara gị nke ọma.
Dị ka nchọpụta mpaghara gbanwere, Google malitere Google My Business na nke ahụ nyeere ụlọ ọrụ aka inwe ezigbo njikwa na nsonaazụ ọchụchọ ala ha site na peeji nsonaazụ ọchụchọ engine “map pack”. Tinyere ọrụ na nyocha dị ukwuu, ụlọ ọrụ gị nwere ike ịrịgo elu nke ndị asọmpi ya site na ịnwe ọnụnọ mpaghara na-arụsi ọrụ ike.
Mana inwe ndekọ ndekọ, akaụntụ Google My Business, na ịnakọta nyocha abụghị naanị igodo ọchụchọ mpaghara. Google amachaala nke ọma n’iwu ụlọ algọridim nke nwere ike ịmata aha ụlọ ọrụ na ntanetị n’enweghị backlink. A maara ndị a dị ka amaokwu.
Gịnị bụ Tikeeti?
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ahụ maka ọchụchọ na-arụsi ọrụ ike iji nweta nyocha na backlinks, ụlọ ọrụ mpaghara gị nwekwara ike ịmalite visibiliti mpaghara ya site na amaokwu.
Gịnị bụ Owuwu Owuwu?
Ebe a na-ewu ụlọ bụ usoro nke ijide n'aka na akpọrọ aha gị n'ịntanetị site na weebụsaịtị ndị ọzọ yana amaokwu na-agbanwe agbanwe. Mgbe engines na-achọgharị ugboro ugboro na nso nso a na-ahụ ntanetị ntanetị nke pụrụ iche na azụmahịa gị, ọ pụtara na azụmahịa gị na-ekwenyekwu na ha ga-aga n'ihu ịkwado gị maka ọchụchọ na mpaghara-online.
Ozo ihe di nkpa karie mgbe obula n’ihi na o wulite onu ogugu nke intaneti na ebe nrụọrụ weebụ. N'ime ụwa ebe ọkara nke ọchụchọ Google niile nwere ederede mpaghara, nke a bụ atụmatụ dị oke egwu.
Nchọgharị olu na amaokwu
Site na uto nke olu olu, inwe ederede kwesiri ekwesi na-abụwanye ihe dị oke egwu. Nchọgharị olu anaghị enye gị ohere ịnweta onye ọbịa ọ gwụla ma azụmahịa gị bụ azịza ya na data ị na-enye engines ọchụchọ bụ eziokwu.
Ihe kariri 1 n’ime mmadu 5 n’iile na-eji olu olu ma 48% nke ndi n’acho olu achoro onu ahia nke obodo.
Uberall bụ ikpo okwu nke na-enyere njikwa nke oge iji chekwaa data ọnọdụ data gafee nyiwe ọchụchọ niile, sistemụ eserese, yana ọwa mgbasa ozi na-agbasa ahịa. Uberall na - enyere ndị ọchụnta ego aka ijikwa azụmahịa ha na ntanetị, aha ha na mmekọrịta ndị ahịa na ezigbo oge n'otu nyiwe ha na-akpọ igwe ojii ahia ahia.
Rịọ Uberall Demo
Uberall amalitela Uberall Dị Mkpa, usoro a na-akwụghị ụgwọ nke ikpo okwu ya iji kwado ụlọ ọrụ nlekọta ahụike, ndị na-ere ahịa na ụlọ nri n'oge ọrịa na-efe efe. Ha nwere ike iji Uberall dị mkpa iji melite ndepụta ha n'efu na Google, Apple, Facebook, Bing, Yelp na ndị ọzọ.
Ha ebipụtala ihe omuma a, Ulo Oru, nke na-enye nkọwa zuru ezu banyere amaokwu, ụlọ ntinye aka, na abamuru nke atụmatụ ahụ.
Tags: google azụmahịa minfographicNdepụtanọmba ekwentịkedu ihe bụ edemede
Ichegharia B2B ahia ahia? Nke a bụ otu esi ahọrọ mkpọsa mmeri